Mogadishu Journal » 2021 » September » 9
Qatar Airways flies passengers on first commercial international plane from Afghanistan since US withdrawal. 9 Sep 2021 More than 100 passengers have arrived in Doha, Qatar after flying from Kabul airport on the first flight ferrying out foreigners since a US-led evacuation...
Diiwaangelinta musharixiinta xubnaha Aqalka Sare ku matalaya Maamulka Hirshabelle ayaa ka bilaabatay maanta magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle. Guddiga doorashooyinka heer dowlad Goboleed ee Hirshabelle ayaa diwaangeliyay musharaxiin uu ka mid yahay Senator Cusmaan Maxamuud...
Guddoomiyaha baarlamanka xiligiisu dhamaaday ee Somalia Maxamed Mursal C/raxmaan ayaa sharci daro ku tilmaamay talaabadii uu maanta wasiirka cadaalada ku dhaariyey wasiirka cusub ee amniga Somalia C/llaahi Maxamed Nuur. Qoraal ka soo baxay Gudoomiye Mursal oo loo diray xafiiska...
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka qeyb galay dhaarinta Wasiirka cusub ee Amniga Gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur oo uu shalay xilkaas u magacaabay Ra’iisul Wasaaruhu. Wasiirka Caddaaladda ee XFS Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa xafiiska Ra’isul...
Waxaa goordhaw magaalada Muqdisho shir xasaasi ah oo albaabada u xiran yihiin uga furmay taliyaasha Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya, shirkan ayeyna uga arinsanayaan xaalada siyaasadeed dalka ku jiro iyo mida amni. Shirka ay joogaan dhamaan taliyaasha Ciidamada waxaa ku sugan...